Diabe ho eny Iavoloha : Tsy manaiky hatao sorona intsony ny olona -
AccueilSongandinaDiabe ho eny Iavoloha : Tsy manaiky hatao sorona intsony ny olona
Nihemotra tamin’ny ora farany ireo depiote miisa 73 raha nikasa ny hitondra olona ho eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha androany. Tsy nahomby mantsy ny fitaomana olona, hany ka mihena am-pitoerana toa fen’antitra ireo olona mankeny an-kianja. Efa maro tamin’ireo olona mpomba azy ireo no nihemotra, satria nahatakatra ny teti-dratsin’ireto solombavambahoaka ireto. Niaraha-nahita ihany koa fa tsy nahomby ny fanerena ireo mpiasam-panjakana hanara-dia azy ireo. Tsy nety nikatso mantsy ny asam-panjakana, na dia nohidiana amboletra aza ny varavaran’ireny minisitera ireny. Maro tamin’ireo mpiasa no nahatsapa fa tsy mitondra afa-tsy fatiantoka ho an’ny firenena ny fanakatsoana ny asa, ka dia nanohy ny asany izy ireo. Nazava tamin’ny ankamaroan’ireo olona nankeny an-kianja ihany koa ny tetika maloton’ireto depiote ireto, ny amin’ny fikasana hanao sorona azy ireo indray, ka naleon’izy ireo niverina nandray ny asany. Efa vitsy sisa araka izany ireo olona mihaino ny rediredin’ireto solombavambahoaka ireto amin’ny fikasan’izy ireo hanimba ny firenena. Ho sarotra ihany koa ny handeha tsy miaraka amin’olona maro eny amin’ny faritra mena, satria lasa ireto mpitarika ireto mihitsy no ho sorona amin’izany. Efa nampahafantatra rahateo ny mpitandro filaminana fa tsy handefitra mihitsy raha toa ka misy olona minia manao amboletra miditra amin’izy ireny. Mitsinjo ny ainy araka izany ireto solombavambahoaka ireto, ka izay no nahatonga azy ireo tsy nitovy hevitra momba ity fikasana ny hanao diabe ho eny Iavoloha ity.
Nanome lesona ireto mpanao politika ireto ny vahoaka tamin’ity indray mitoraka ity. Nataon’ireo olona fantatr’ireto solombavambahoaka ireto fa efa tsy mitovy tamin’ireo taonjato nisian’ny fitokonana hatramin’izay intsony izao fa efa hafa. Mbola nino izay nolazain’ireo mpanao politika mantsy ny vahoaka ny taona 1991, izay nanaovana ny diaben’ny fahamarinana, nanesorana ny Amiraly teo amin’ny toerany tamin’izany. Toa izany ihany koa ny tamin’ny 7 Febroary 2009, izay mbola naneken’ny vahoaka natao sorona teny amin’ny lapan’Ambohitsorohitra. Ankehitriny dia efa niakatra ny fahatsapan-tenan’ny mahoaka Malagasy, ka niala maina ireo nikasa ny hanao sorona azy noho ny resaka seza, sy ny fitiavam-pahefana tafahoatra. Nahay nisintona lesona tamin’ny tantaram-pirenena hatramin’izay mantsy ny vahoaka ankehitriny, ary nahatsapa fa izy ireo ihany noa hivesaran’ny fatiantoka noho ny rendrarendran’ny mpanao politika noho ny fitadiavam-boninahitra. Rariny, ary hitsiny araka izany raha toa ka navelan’ny vahoaka niboridana noho ny heviny ireto mpanao politika liam-pahefana ireto. Toa tsy misy paikady vaovao mantsy, fa izay fomba nentin’ireo mpanao politika nanongam-panjakana hatramin’ny taona 1972 ihany no mbola haverina hatramin’izao. Hany ka tsy mahagaga raha toa ka efa tsinjon’ny vahoaka malagasy mialoha ny ho vokatr’izao fanakorontanana ny firenena ankehitriny izao.
Maro amin’ ireo kandida izay mirotsaka hofidiana no faly sy ravo taorian’ ny fanafoanana ny andininy faha-74 sy 75 mifehy ny fifidianana amin’ ny ankapobeny sy ny fitsapan-kevi- bahoaka, io lalàna io izay mandrara ny ...Tohiny